Akhriso Generaal Indha Cadde oo sir badan Ka shifay | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Akhriso Generaal Indha Cadde oo sir badan Ka shifay
Akhriso Generaal Indha Cadde oo sir badan Ka shifay
Wasiiru-dowlihii hore ee Wasaarada gaashaandhiga xukuumada Soomaaliya Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha Cadde) ayaa sheegay in Al Shabaab ku dhax milmeen Hay’adaha dowlada ayna meel kasta ku jiraan xiligan.
Jeneraal Indha Cadde oo la hadlay Idaacada Kulmiye ayaa sheegay in layaab ku noqotay in Fanaan heesa laga dhax helo kooxda Al Shabaab, waxa uuna tilmaamay in taasi meesha ka saareyso in Al Shabaab diinta u dagaalameyso.
Waxa uu sheegay Indha Cadde in Al Shabaab ku dhax milmeen hay’adaha dowlada ayna meel kasta ku jiraan, waxa uuna arintaasi sabab uga dhigay in hay’adaha amniga aysan joogin dadkii amaanka ku xeel dheeraa oo meel kasta uga dabatagi lahaa kooxdaasi.
”Al Shabaab waxa ay ku dhax milmeyn hay’adaha dowlada, nimankan markii hore diin ayey sheegan jireen laakin hada waxa ay isku bedeleen maafiyo, kooxaha maafiyada markii awood beelaan waxa ay isku bedelaan kuwa wax dhaca dadka baada oo albaab walba ku jira” ayuu yiri jeneraal Indha Cadde.
Sheekh Yuusuf Indha Cadde ayaa sheegay in Al Shabaab ku jiraan Madaxtooyada , golaha Wasiirada, Baarlamaanka , iyo ciidanka, waxa uuna tilmaamay in Hay’addaha dowlada ugu dhax jiraan kuwa sirdoon ah oo xogaha u gudbiya si toosna ula shaqeeya.
“Al-Shabaab meel walba ayay ku jiraan, Madaxtooyada ayay ka mid yihiin, Baarlamaanka ayay ka mid yihiin Golaha Wasiirada, hey’adaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida, meel aysan ka mid aheyn ma jirto”ayuu yiri Indha Cadde.
Hadalka Jeneraal indha Cadde ayaa kusoo aadaya laamaha amaanka ee Muqdisho gacanta ku dhigeen Macalin iyo Fanaan katirsan kooxda Fanka gobolka Banaadir kuwaa oo qirtay in ay la shaqeenayeen kooxda Al Shabaab.
Previous articleXasaasi:- khaladka ay ku dhaqaaqday dowlada Somalia arimaha doorashada galmudug
Next articlePuntland State lays off 88 ‘redundant’ police officers